Ithegi: ithemba | Martech Zone
Umxholo ongaphezulu, iingxaki ezingakumbi: Ubunzima beNtengiso yeRep
NgoLwesibini, Juni 17, 2014 Douglas Karr
Kudala sipapasha kancinci malunga nezixhobo ezingqamanisa ukuthengisa kunye neenzame zokuthengisa. Ngokoluvo lwam, abameli bokuthengisa banomsebenzi onzima ngakumbi ukukwenza kule mihla. I-59% yexesha labo besenza eminye imisebenzi ngaphandle kokuthengisa njengokuphanda iakhawunti kunye nokwenza izikhokelo. Kwaye abathengi kunye namashishini bayakwazi ukwenza uphando olungaqhelekanga kwi-intanethi, ukuvavanya amanqaku, izibonelelo, iimveliso, iinkonzo, ukulinganisa kunye nokuphononongwa. Ngaphandle kobuninzi bezinto zokuthengisa ezikhoyo, iipesenti ezingama-40 zentengiso
Amashishini amaninzi kwishishini (B2B) imijikelezo yokuthengisa inde kwaye inzima. Kukulinganisela kokugcina phezulu kwengqondo kunye nethemba de kube kuthathwe isigqibo sokuthenga kwaye ungazenzi ibugging kwaye uzigxothe. Ndibukele abanye abantu bekhulisa kakuhle, kwaye ndibeke "Ungaphenduli" kwincwadi yam yefowuni ukunqanda abantu abathengisayo. Uphando luthi ukuchonga ithemba kuxabisa i-443 yeedola ngelixa undwendwela enye iqhuba i-596 yeedola. Ngoba
Kukho umahluko phakathi komntu othengisayo kunye nokusondela. Ndiyakholelwa ukuba ndingumthengisi omkhulu, kodwa kufutshane kakhulu. Ndiyazi ukuba ndithengisile ukubandakanyeka okukhulu, kodwa andizange ndibengumntu otyhalele inki (ukusayina isivumelwano). Andikonwabeli ukutyhalela emva kubungakanani bekhontrakthi okanye ukufaka uxinzelelo kwithemba lokutyikitya kwangaphambili. Ngombulelo, ndingqongwe yitalente emsebenzini wam abonwabileyo loo mathuba. Abavali bethu bayakwazi